अस्ट्रेलियामा तमु ल्होछार! :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
अस्ट्रेलियामा तमु ल्होछार!
सेतोपाटी संवाददाता सिड्नी, पुस २५
तमु समाज सिड्नीको आयोजनामा ल्होछार नयाँ वर्ष भब्य कार्यक्रमका साथ आयोजना गरिएको छ । तमु समाजले शनिबार सिड्नीको हर्षभीलस्थित मरना अडीटोरियम भब्य ल्होछार मनाउदै चरा वर्षको बिदा र कुकुर वर्षको स्वागत गरेको हो।
भगवान गौतम बुद्धको पूजा, विभिन्न मनोरन्जनात्मक प्रस्तुतिहरु, तमु संस्कृतिक नृत्य, स्वादिस्ट नेपाली परिकारका साथमा गण्डकी तारा मनोज गुरुङको साथमा ल्होछार मनाइएको थियो।
कार्यक्रममा अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पाले बिदेशी भूमीमा बसेर आफ्ना धर्म र संस्कृतिको जर्गेना गर्नु महत्वपूर्ण विषय भएको बताइन्। राजदूत शेर्पाले विश्वको कुनै कुनामा रहेर पनि आफ्नो पहिचान जोगाउने विषय आफैंमा गर्व गर्न लायक रहेको सुनाइन्। आफ्नो धर्म, कला र संस्कृतिको जर्गेना गर्दै अरू धर्म र वर्णको सम्मान गर्ने परम्परा आजको आवश्यकता रहेको शेर्पाले बताइन्।
कार्यक्रममा तमु समाजका अध्यक्ष टंक गुरुङले एनआरएनका उपाध्यक्ष नन्द गुरूङ, सुजाता बस्नेतलगायत सहयोगी तथा प्रायोजकहरुलाई सम्मान गरेका थिए। तथा पुराना पदाधिकारीहरुको सम्मान गरेका थिए। कार्यक्रममा पाका ब्यक्तत्वि श्यामबहादुर गुरुङले तमु समाजका पूर्वअध्यक्षहरु देब गुरुङ ,प्रेम ,यु गुरुङ र ज्ञान गुरुङलाई खादा ओढाएर सम्मान ब्यक्त गरेका थिए ।
युवा संचारकर्मी सरल गुरुङले सन्चालन गरेको कार्यक्रममा बिभिन्न समाजिक संघ संस्थाका पदाधिकारी तथा ब्यक्तीत्वहरुको बाक्लो उपस्थीती रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २५, २०७४, ०३:२५:०४